UPDATE: Somaliland oo shaacisay kiisas cusub oo Covid-19 ah | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Somaliland oo shaacisay kiisas cusub oo Covid-19 ah
UPDATE: Somaliland oo shaacisay kiisas cusub oo Covid-19 ah
Hargeysa (Halqaran.com) – Somaliland ayaa Arbacada maanta ah ku dhawaaqday natiijada dad looga shakisnaa Cudurka Safmareenka ah ee Coronavirus, kuwaas oo baaritaano lagu sameeyey qaarkood laga helay Cudurka COVID-19.
War kasoo baxay Guddiga Somaliland u qaabilsan xakameynta Cudurka COVID-19 ayaa lagu sheegay in la baaray 59 Ruux, balse 17 kamid ah Cudurka laga helay, kuwaas oo haatan ku jira xaalad karantiil ah.
Dadka Cudurka laga helay oo isugu jira 9 Rag ah Afar Dumar ah ayaa waxaa ay ku kala sugan yihiin 9 Ruux Magaalada Hargeysa, halka 4 kale ay ku sugan yihiin magaalada Berbera.
Majirin wax dhimasho ah oo uu sababay Cudurka COVID-19 deegaannada Somaliland 24-kii Saac ee la soo dhaafay, waxaana weli deegaannada Somaliland ka socda baarista Cudurka COVID-19.
Ugu dambeyn, Guddiga waxa ay sheegeen in tirada Guud ee Cudurka Coronavirus laga helay deegaannada Somaliland ay gaartay 479 Ruux 81 Qof ay ka bogsoodeen halka 26 Ruux ay u geeriyoodeen.